Krishnap.com.np: Internet Explorer र security
Internet Explorer र security
Microsoft को वेब ब्राउजर Internet Explorer-IE) को नयाँ संस्करण IE 8 र्सार्वजनिक भएको धेरै भइसकेको छ । IE 8 प्रयोगकर्ताका लागि सरल एवं सहज भए पनि Microsoft ले पुराना भर्सनका ब्राउजरमा भएको समस्या नहटाएका कारण IE 8 को लोकप्रियता खासै बढ्न सकेको छैन । विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा इन्बिल्ट आउने हुनाले संसारका धेरैजसो प्रयोगकर्ताले IE का कनै न कुनै भर्सन प्रयोग गरिरहेका छन् । के हुन् त IE ८ का ठूला कमजोरी -
Internet Explorer को सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने विषय भनेकै security हो । हाल इन्टरनेटमा आधारित कारोबार बढिरहेका छन् । तर, Microsoft ले आर्ईईमा सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनेतर्फध्यान दिएको छैन । इन्टरनेटमार्फ गरिने कारोबारमा रोक लगाईएको अवस्थाको सुरक्षास्थितिबाटै चलेकाले उच्च इन्टरनेट कारोबार हुने मुलुकमा यसको प्रयोग घटदै गइरहेको छ । मानिस यसको विकल्पमा Mozilla Firefox, Safari, Opera, chrome रोज्न थालिसकेका छन् । सामान्य चेतावनी दिएको भरका जुनसुकै वेबसाइट खोलिदिनु नै IE को सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यसैगरी IE मा टाइप गरेका पार्सवर्ड पुनः दोहोरिने हुनाले गोपनीयता भंग हुने संभावना उच्च छ ।
Internet Explorersमा अझै पनि आवश्यक पर्ने Plug-ins आफैं डाउनलोड गर्नुपर्छ । वेबसाइटमा भएका एनिमेटेड विज्ञापन हुन् वा अन्य कुनै म्याटर IE 8 बाट हेर्न चाहनुभयो भने Adobe Flash Player प्रयोगकर्ता आफैंले डाउनलोड गर्नुपर्छ । यसैगरी अन्य प्लगइन पनि आफैं अपडेट नहुने भएकाले बारम्बार डाउनलोड गर्नुपर्ने समस्या छ । तपाईंले कुनै वेबसाइट खोल्न खोज्नुभयो तर तपाईंको IE 8 मा त्यसका लागी चाहिने प्लगइन छैन भने वेबसाइट खुल्दैन । 'IE 8 ले तपार्इंको साइट खोल्न सकेन' भन्ने सन्देश आउँछ ।
Posted by Krishna Pokhrel at 3:43 AM
Ya hoo!! … फेसबूक
2010 Social Networking Websites Review Comparisons...
Chrome मा थ्रि डी हेर्न सकिने
ट्विटर अन्य र्साईटबाटपनि चलाउन सकिने
Microsoft Corporation को नयाँ free Antivirus
Type your summary here सि.नं.	ब्रान्ड	समुह	देश	न...
ईन्टरनेटलाई नोवेल पुरस्कार ।
ओपेरामिनीको नयाँ भर्सन
उत्तर कोरियाको आफ्नै Operating System
youtube मा बहिराले बुझ्ने भिडियो
अनलाइन फोटो इडिटिङ - पिकनिक डटकम(picnik.com)
जिमेलमा ६ सुविधा थपिए, ५ हर्टाईए
छिटो डाटा ट्रान्सफरकालागी USB 3.0